कुन भगवानको सोमबार पूजा आराधाना कसरी गर्ने ? मन्त्रसहित – Saurahaonline.com
कुन भगवानको सोमबार पूजा आराधाना कसरी गर्ने ? मन्त्रसहित
काठमाडौँ : सोमवारको दिन हिन्दू धर्म परम्पराअनुसार भगवान शिवका लागि समर्पित छ । मानिन्छ कि शिवजीको भक्तिका लागि हर समय नै शुभ मानिन्छ । पवित्र मनले पूजा गरेमा शिव आफ्नो भक्तहरुसंग चाडै प्रसन्न हुन्छन् ।